China Dongshen ịkpụ ntutu ahịhịa kacha mma baajị ntutu acha anụnụ anụnụ resin na -ejide akara onwe ahaziri ahaziri nha ụmụ nwoke na -akpụ afụ ọnụ emeputa na onye na -eweta ngwaahịa | Dongmei
Dongshen na -akpụcha ahịhịa kacha mma baajị ntutu na -acha anụnụ anụnụ resin na -ejikwa akara nkeonwe nha nha ahịhịa ụmụ nwoke
Ahịhịa ịkpụ afụ ọnụ Dongshen bụ nke ejiri ntutu kacha baajị mma na aka resin mee. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị.
Akụrụ ọnụ ihe Badger hair (kacha mma baajị ntutu)
Ntutu kacha mma
Brọsh ntutu kacha mma na-akpụ isi bụ ahịhịa na-adị mfe karịa, ntutu dị nro site na ihe dị ka 20-25% nke ahụ ewi. Ọ dị ogologo ma nwee ụcha dị nro karịa ewi ọcha. Ahịhịa ewi 'kacha mma' juputara na ntutu karịa ahịhịa badger 'dị ọcha' ọ ga -ewepụtakwa ntụpọ nke dabara adaba. Azụ kacha mma kacha mma na ntutu ntutu kacha mma na -adịkarị mma ka a ghara ịkpụcha ihu ya ka ọ kpụzie ebe ajị ajị dị ọcha na -akpụzi, na -ebute njedebe na -adịghị ike.
Ojiji zuru ụwa ọnụ: Ngwa ịkpụ afụ ọnụ ụmụ nwoke zuru oke maka ihe niile dị nchara
Emepụtara site na ajị ajị siri ike yana njiri ergonomic iji hụ na njigide siri ike, ahịhịa ịcha afụ ọnụ na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị.
Ọ dị mma maka iji Razors Safety, Double Edge Razors, Razors Straight na ụdị ajị ajị ajị anụ, ahịhịa ịcha afụ ọdịnala anyị nwere ntutu ajị anụ dị ọcha na -emeso ntutu ihu gị nke mmiri mmiri ka ọ dị mma na -enweghị atụ!
Ezigbo ahịhịa na -akpụ afụ ọnụ
Dị ka ihe na-egosi izi ezi ntutu ewi, ahịhịa anyị na-akpụ afụ ọnụ nwere ike ịnwe isi njiri mara agwa mgbe ejiri ya mee ihe- echegbula, ọ ga-apụ n'oge na-adịghị anya!
Wepu nchacha ncha ncha ncha mbụ gị site na ịzere mmiri ọkụ- jiri ya na mmiri ọkụ mee ka ntutu ya dị nro ma na-egbu maramara, maka ịrụ ọrụ ịkpụ afụ ogologo.
Nke gara aga: Dongshen omenala omenala onwe labelụ elu mma softti silvertip badger ntutu resin aka nwoke ihu shaving ahịhịa.
Osote: Dongshen okomoko adịchaghị mma na-enweghị eriri eriri sịntetik ntutu resin na-ejikwa akara ngosi ihu ihu ahịhịa ahịhịa
Ntutu Badger Loose
Nchacha Ncha Mens
Badger Ịcha afụ ọnụ
Ịchacha ahịhịa N'ogbe
Dongshen okomoko 100% boar bristles oval osisi ...
Ala vegan sịntetik ntutu isi ọkachamara s ...
Dongshen etemeete ahịhịa Cleaner siri ike ncha Spong ...
Dongshen retractable Kabuki etemeete ahịhịa wholes ...
etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Nịm etemeete ahịhịa,